मौसमले साथ दिए राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षा हेर्न सकिने ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचारमौसमले साथ दिए राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षा हेर्न सकिने !
मौसमले साथ दिए राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षा हेर्न सकिने !
मौसमले साथ दिएको खण्डमा बिहीबार राति नेपाली आकाशमा उल्का वर्षाको रमाइलो दृश्य देख्न सकिनेछ। बैशाख ३ देखि सक्रिय भएको वीणा उल्कवर्षा (लाइरिड मिटियोर सावर) बैशाख १७ गतेसम्म सक्रिय रहनेछ भने बिहीबार राति अर्थात बैशाख ९ गते राति ११:०० बजेदेखि शुक्रबारको सुर्योदयसम्मको समयमा हेर्न/देख्न सकिनेछ।
‘अत्यधिक सक्रियताको समयमा प्रतिघन्टा १५–२० वटा उल्का खसेको देख्न सकिनेछ’ नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटी (नासो) का अध्यक्ष सुरेश भट्टराईले भने। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बिहीबार राति देशभर पहाडी भूभागहरुमा आँसिकदेखि सामान्य बदली रही पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरुमा मेघगर्जन/चट्टयाङ्ग/हावाहुरी सहित क्षणिक वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
थ्याचर नामक पुछ्रेताराले छोडेका धुलाका कणहरु पृथ्वीको वायुमण्डलमा घर्षण भई जलेर नस्ट हुँदा यो उल्का वर्षा देखिने गर्दछ। थ्याचर पुछ्रेताराले सूर्यको एक परिक्रमा लगाउन ४ सय १५ वर्ष लगाउँदछ। पुछ्रेतारा वा धुम्केतुहरुले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने क्रममा आफ्नो कक्षमा धूलाका कणहरु छोड्ने गर्छन जुन लाखौ किलोमीटरसम्म फैलिन सक्छन।
यसरी फैलिएका धूलाका कणहरुले सूर्यलाई परिक्रमा गरिरहेको हुन्छ। परिक्रमा गर्ने क्रममा जब यी धूलाका कणहरु पृथ्वीको वायुमण्डलमा ठोकिन्छन् तब उल्का देखिन्छ। यदि यस्तो दृश्यमा १० वा सो भन्दा बढी उल्का देखिएमा त्यस्तो घटनालाई उल्का वर्षा भन्ने गरिन्छ।